IApartment 2 SoloStar d.o.o.
Amagumbi ahlala kwindlu yangasese evaliweyo, ejikelezwe ngocingo, kwisitalato esikhulu sesixeko. Indlu yestudio incinci ye-20 m2. Kukho indawo yasekhitshini kunye nazo zonke izixhobo zokutya nokupheka. Ubuthongo obutofotofo, kukho ibhedi ephindwe kabini ebalaseleyo 140 x 200. Kukho amakhethini amnyama avala ngokupheleleyo ukukhanya kwifestile. I-TV yesathelayithi. Ukulawula ubushushu kwixesha elibandayo, ungasebenzisa i-heater kwindawo yokuhlambela kunye ne-radiator yombane.
Indlu yabucala yokuhlala yolwakhiwo lwase-Italiya ngo-1936. Ubunzima bodonga lwama-50 cm, oluqhelekileyo kwizakhiwo zelo xesha, lubonelela nge-microclimate yendalo ngaphakathi kwesakhiwo ngexesha lokushisa kwaye ayifuni i-air conditioner.
Ngexesha leMfazwe Yehlabathi yesiBini ngoNovemba 9, 1942, ikomkhulu leLiberation Front lalisendlini. Oku kuboniswa yi-plaque yembali emiswe eludongeni lwendlu. Emva kokuphela kweMfazwe Yehlabathi II, i-Italiya yomkhosi yaphulukana nomhlaba, kuquka i-Postumia (i-analogue yase-Italiya yegama elithi Postoina).
Indlu yalungiswa ngo-2010. Imibhobho yamanzi neyogutyulo yatshintshwa ngokupheleleyo. Inkqubo yokufudumeza efakwe kwii-radiator. Kunokwenzeka ukunciphisa okanye ukwandisa ubushushu begumbi kwi-radiator ngesandla. Isifudumezi esongezelelweyo sifakwe kwigumbi lokuhlambela ukuqinisekisa elona qondo lobushushu likhululekileyo lokuhlamba. Ukungena komoya wegumbi kunokwenzeka ngokuvula ifestile yeplastiki exhotywe ngeemfama.
Ukusela amanzi etephu. Ukubilisa akuyimfuneko, nangona i-kettle kunye neekomityi zinikezelwa.
Igumbi linomabonakude wesathelayithi. I-LG TV ivulwa ngeqhosha elibomvu ukusuka kwi-LG remote control okanye ngesandla. Emva koko kusetyenziswa olunye ulawulo olukude oluqhagamshelwe kwi-eriyali. Tshintsha amajelo nge + okanye - iqhosha.
Indlu yangasese yokuhlala eyakhiwe ngo-1936. Ubunzima bodonga lwama-50 cm oluqhelekileyo lwezakhiwo zelo xesha lubonelela nge-microclimate yendalo ngaphakathi ngexesha lokushisa kwaye ayifuni i-air conditioner.
Ngexesha lemfazwe yehlabathi yesiBini ngowe-11/9/1942 kwikhaya lekomkhulu leLiberation Front. Oku kungqinwa yiBhodi yembali exhonywe eludongeni lwendlu. Emva kokuphela kwemfazwe yehlabathi yesibini, i-Itali eyayinomkhosi wamajoni yaphulukana nomhlaba, kuquka iPosthumous (igama lesiTaliyane elilingana negama elithi Postojna).
Indlu yalungiswa ngo-2010. Imibhobho yamanzi kunye nogutyulo lwatshintshwa ngokupheleleyo. Inkqubo yokufudumeza efakwe kwii-radiator. Kunokwenzeka ukunciphisa okanye ukwandisa ubushushu begumbi kwi-radiator ngesandla. Ishawari ixhotyiswe ngesifudumezi ukuqinisekisa elona qondo lobushushu likhululekileyo lokuhlamba. Ukungena komoya wegumbi kunokwenzeka ngokuvula ifestile yeplastiki exhotywe ngeemfama.
Amanzi etephu ayaselwa. Ukubilisa akuyimfuneko, nangona kunikezelwe ngeketile, iikomityi.
Igumbi lixhotyiswe ngeTV yesathelayithi. I-LG TV ivulwa ngeqhosha elibomvu ukusuka kwi-LG ekude okanye ngesandla. Emva koko kusetyenziswa enye indawo ekude eqhagamshelwe kwi-eriyali. Tshintsha amajelo nge + okanye - iqhosha.
4.76 out of 5 stars from 200 reviews
4.76 · Izimvo eziyi-200
Umtsalane oyintloko wePostojna kukutyelela kwiCave yasePostojna kunye neNqaba yasePredjama, eqoshiwe edwaleni. Indlela eya kumgodi wePostojna ukusuka kwindlu iya kuthatha imizuzu eyi-15. Endleleni, kukho ithuba lokuhlola isiseko esidala sedolophu yaseMaylont, apho kwisitayela saseNtaliyane, ukumbambana, izakhiwo ezinqabileyo zigcwele izakhiwo zokuhlala. Induli ephakame ngaphezu kombindi wesixeko yindawo entle yokuzonwabisa kunye nokuhamba kwendalo. Kukho iindlela zomjikelo eziphawulweyo. Isikhokelo somzila webhayisekile sibekwe kwiziko lolwazi kwisikwere sedolophu esembindini. Kuyenzeka ukuqesha ibhayisekile ngentlawulo. IPostojna ikwisiqingatha esiphakathi kwekomkhulu laseSlovenia iLjubljana kunye nonxweme lweMeditera. Kumacala omabini, i-50 km okanye i-40 min. nge-autobahn ngemoto (i-vineta efunekayo), okanye i-60 min. ecaleni kwendlela yengingqi ebukekayo (esimahla). Kukwakho nezithuthi zikawonke-wonke eziqhelekileyo.
Ehlotyeni, ndisoloko ndisendlini. Ndiyakwazi ukudibana nawe kwisikhululo sikaloliwe okanye kwisikhululo sebhasi, lungiselela ukudluliselwa kwiNqaba yasePredjama.
Ehlotyeni ndiphantse ndihlale endlini. Ndingadibana nawe kwisikhululo sikaloliwe okanye kwisikhululo sebhasi, lungiselela ukudluliselwa kwinqaba yasePredjama.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Postojna